Vaovao - Ampio ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fampandrosoana tsena
Ampio ireo mpiara-miasa hampandroso tsena
Ny 26 feb.2018, ny filoha lefitra Sales Lihong Chen dia mitsidika ireo mpiara-miasa maharitra Bromic Group. Ny ezaka dia tokony hatao mba hanomezana fahafaham-po ny fepetra takian'ny mpiara-miombon'antoka, fanampiana ny mpiara-miasa amin'ny fampandrosoana ny tsena. Valizy famolavolana Multi Turn;F1960&F1807 Fittings varahina ; Baolina varahinamiditra tsimoramora, sns. Toy ny Home Depot, Apollo, Watts, tec. Ireo mpanjifanay dia afa-po tamin'ny vokatra sy serivisy avo lenta.
Izahay dia manizingizina ny foto-kevitry ny orinasa "Ny mpanjifa aloha, miorina amin'ny kalitao" ary hanohy hametraka fiaraha-miasa amin'ny tso-po amin'ny mpanjifa tsirairay.
Ankehitriny dia vanim-potoanan'ny fipoahana vaovao ny fiaraha-monina, ny orinasa amin'ny vokatra dia tsy azo ihodivirana hihaona amin'ireo mpifaninana, fifaninanana indostrialy, ho an'ny orinasa sasany, zavatra tsara izany. Noho ny fifaninanana dia nanatsara ny kalitaon'ny vokatra ny orinasa ary nanatsara ny kalitaon'ny serivisy, ary ny mpanjifa dia nahazo fanjifana sy serivisy tsaratsara kokoa na betsaka noho ny vola kely….
"Sieve" ny tsena. Raha mandroso sy mandroso ny indostria, ny tsena koa dia mandresy amin'ny fifaninanana eo amin'ny sehatry ny indostria. Nanjary orinasa mpamokatra tontolo i Sina, ary firenena lehibe koa amin'ny fanamboarana paompy sy valva. Tamin'ny taonjato vaovao, ny indostrian'ny paompy sy ny valiny dia nanao fampandrosoana haingana, nefa koa miatrika fifaninanana mahery vaika sy fanamby mafy.
Ny orinasa paompy sy valva ihany no afaka mahatakatra tsara ny zava-misy ankehitriny amin'ny indostria, manatsara hatrany ny vokatr'izy ireo, manamafy ny fahatsapana fanahiana, manamafy ny kolontsain'ny orinasa sy ny foto-kevitry ny serivisy amin'ny tsena….
Miaraka amin'ny famporisihana sy fanohanana ny politikam-pirenena, Shanghai, Fujian ary Zhejiang dia manao ezaka lehibe hampiroborobo ny fanovana sy fanavaozana ny indostrian'ny paompy sy valizy, ao anatin'izany ny orinasam-panjakana, orinasa vahiny ary fiaraha-miombon'antoka.
Ny vinan'ny fampiasam-bolan'ny indostrian'ny valiny any Sina dia tena malalaka. Mazava ny hoavin'ny indostrian'ny paompy sy valva. Avy amin'ny zavatra niainana taloha, ny faran'ny ambany ny indostrian'ny valin'ny Shina dia nahatratra ny fametrahana toerana. Ireo orinasa an-trano eo amin'ny sehatra afovoany sy avo lenta dia manolo tsikelikely ny fanafarana tombony azo avy amin'ny vidiny, fantsona ary serivisy ary antenaina hiditra amin'ny tsena iraisam-pirenena hifaninana amin'ny tsena iraisam-pirenena.